(( ရိုဟင်ဂျာဆိုတာဘယ်သူတွေလဲ )) | The Mandalay Gazette-Myanmar/Burma News Media Forum Network
Copy/Paste » (( ရိုဟင်ဂျာဆိုတာဘယ်သူတွေလဲ ))	20
(( ရိုဟင်ဂျာဆိုတာဘယ်သူတွေလဲ ))
Posted by koyinmaung on Jun 17, 2012 in Copy/Paste | 20 comments
မြန်မာတိုင်းရင်းသားတွေပါဆိုလာတယ် ကျနော်တို့နိုင်ငံနဲ့ကပ်လျှက်ဘာသာတူရုပ်တူ ဘင်္ဂလားဒေ့နိုင်ငံကျတော့
ဒီရိုဟင်ဂျာမွတ်ဆလင်တွေ ဘယ်လိုကနေဘယ်လို ဘင်္ဂလာဒေ့နဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ကို ရောက်နေရလဲဆိုတာစိတ်ဝင်စားလာတာနဲ့
အင်တာနက်ထဲရှာကြည့်လိုက်တာ တွေပါ့ဗျာ ရွာသားတို့လဲ ဖတ်စေချင် ဝေဖန်စေချင်လို့ ကူးတင်ပေးလိုက်ပါတယ်
(( ရိုဟင်ဂျာ ဆိုသူတို့အပေါ် ဒေသခံတို့အမြင် – ဒေသခံတစ်ဦး ))
ယခုတလော ပြည်ပ သတင်းမီဒီယာများက “ရိုဟင်ဂျာ”ဆိုသူတို့သတင်းကို တွင်တွင်ကြီး ထုတ်လွှင့်နေကြ သည်။ ၎င်းတို့ကို “လှေစီးဒုက္ခသည်”များအဖြစ် ပုံဖော်ခဲ့သည်။ ကုလသမဂ္ဂ ဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာ မဟာ မင်းကြီးရုံး တာဝန်ရှိသူများကလည်း ၎င်းတို့အား ဒုက္ခသည်များအဖြစ် သဘောထားပြီး လိုအပ်သလို ကူညီ သွားရန် ပြည်ပမီဒီယာများမှတစ်ဆင့် ထုတ်ဖော်ပြောခဲ့ကြသည်။ နိုင်ငံတကာ လူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့ကလည်း သက်ဆိုင်ရာ အစိုးရတို့အား ၎င်းလှေစီးဒုက္ခသည်တို့အပေါ် အကာအကွယ်ကူညီပေးရန် တောင်းဆိုခဲ့ကြ သည်။
ဤနေရာတွင် ထိုသတင်းများကို မဝေဖန်လိုသော်လည်း “ရိုဟင်ဂျာ”ဆိုသူတို့အပေါ် ဒေသခံ ရခိုင်တိုင်းရင်း သားတို့၏ အမြင်ကို တင်ပြလိုပါသည်။
“ရိုဟင်ဂျာ”ဆိုသူတို့က မိမိတို့ကိုယ်ကို “မြန်မာတိုင်းရင်းသားများ”ဟု ဆိုကြသည်။ အေဒီ(၇)ရာစုကပင် ရခိုင်ပြည်သို့ လာရောက်အခြေစိုက်ကြသော အာရပ်အနွယ်များ ဖြစ်သည်ဟု ဆိုကြသည်။ သို့သော် ရှေးဟောင်းသမိုင်းများ၌ “ရိုဟင်ဂျာလူမျိုး” ဟူ၍ လုံးဝမတွေ့ရှိကြောင်း သမိုင်းပညာရှင်များက ပယ်ချခဲ့ကြ သည်။ ထိုဝေါဟာရသည် ဗြိတိသျှကိုလိုနီခေတ်၌ပင် မပေါ်သေးချေ။ ဗြိတိသျှအစိုးရထုတ်ဝေခဲ့သော မှတ်တမ်းများ၌ မြန်မာနိုင်ငံသို့ ဗြိတိသျှခေတ်တွင် အိန္ဒိယနိုင်ငံသား (ဟိန္ဒူ၊ မူဆလင်) တစ်သန်းကျော် ၀င်ရောက်ခဲ့ကြသည်ဟု ဆိုထားသည်။
အိန္ဒိယသား မူဆလင် ဘခင်နှင့် မြန်မာဗုဒ္ဓဘာသူ မိခင်တို့ ပေါင်းသင်း၍ ပေါက်ဖွားလာသူများကို ဇာဗာဒီ (Zerbadee) များ (သို့) မြန်မာမူဆလင်များဟု အမည်တပ်ခဲ့ကြောင်း တွေ့ရသည်။
ရခိုင်ဘုရင်တို့က စစ်သုံ့ပန်းအဖြစ် ဖမ်းဆီးခေါ်လာသော မူဆလင်များကို “ကမန်”ဟု တစ်မျိုး၊ ရခိုင် မူဆလင်ဟု တစ်မျိုး၊ ခွဲခြားအမည်တပ်ခဲ့ကြောင်း သန်းခေါင်စာရင်းများ၌ တွေ့ရသည်။ ထို့ပြင် ဗြိတိသျှ ခေတ်၌ပင် ၁၈၆၉ခု၊ စူးအက်တူးမြောင်းပွင့်ပြီးနောက် လယ်ယာမြေတိုးချဲ့စဉ် လယ်ယာလုပ်သားအဖြစ် စစ်တကောင်းခရိုင်မှ တံခါးမရှိ ဓါးမရှိ ၀င်လာကြသော ဘင်္ဂါလီ မူဆလင်များကို စစ်တကောင်းသားများ (Chittagonian)ဟု အမည်ပေးခဲ့သည်။ ထိုအမည်ကို မစ္စတာစမတ်( R.B Smart, 1917) နှင့် ဂျိန်းဘတ် စတာ (Jame Baxter, 1939)တို့က ၎င်းတို့မှတ်တမ်းများ၌ သုံးခဲ့ကြသည်။ ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ပြီးသည်အထိ “ရိုဟင်ဂျာ”ဟူသော ဝေါဟာရ မပေါ်သေးချေ။
မြန်မာနိုင်ငံ လွတ်လပ်ရေးရစ၌ ရောင်စုံသူပုန် ထကြသောအခါ ရခိုင်အနောက်မြောက်ဘက် မောင်တော နှင့် ဘူးသီးတောင်မြို့နယ်များတွင်လည်း ဘာသာရေး အစွန်းရောက်သမားများက “မူဂျာဟစ်”(ကုလား သူပုန်) သူပုန်ထခဲ့ကြသည်။ မူဆလင်ပြည်နယ် တောင်းဆိုခဲ့ကြသည်။ ထိုသူပုန်တို့နှင့် အရပ်ရပ်မှ လာ ရောက်ကြသော မူဆလင်ခေါင်းဆောင်များ ပူးပေါင်းပြီး မောင်တောမြို့နယ်တောင်ပိုင်း အလယ်သံကျော် ကျေးရွာ၌ ၁၉၅၁ ခု၊ ဇွန်လတွင် ညီလာခဲ့ကျင်းပခဲ့ကြသည်။ ထိုညီလာခံ ဆုံးတ်ြချက်အရ မြန်မာအစိုးရထံ အိတ်ဖွင့်ပေးစာရေးပြီး မူဆလင်ပြည်နယ်ဖွဲ့ပေးရေး အပါအ၀င် တောင်းဆိုချက်အများအပြား တင်ပြခဲ့သည်။ ထိုစာ၌လည်း “မူဆလင်လူမျိုး”ဟူ၍သာ သုံးနှုန်းခဲ့သည်။ “ရိုဟင်ဂျာလူမျိုး”ဟူ၍ မသုံးနှုန်း ချေ။ ၁၉၅၁ ခု၊ သြဂုတ်လ (၂၀)ရက်ထုတ် ဂါဒီယန်းအင်္ဂလိပ်သတင်းစာ၌ “ရိုဝန်ညှာ”ဟူသော ဝေါဟာရကို စတင်သုံးစွဲ ခဲ့သည်။ ဘူးသီးတောင်ပါလီမန်အမတ် မစ္စတာ အဗ္ဗဒူဂါဖားက ဆောင်းပါးတစ်စောင်ရေးပြီး မောင်တောနှင့် ဘူးသီးတောင်မြို့နယ်များမှ မူဆလင်များမှာ ရခိုင်ဝေသာလီခေတ် မဟာတိုင်းစန္ဒြား လက်ထက်ကပင် သင်္ဘောပျက်၍ရောက်လာသော အာရပ်အနွယ်များဖြစ်ကြောင်း၊ သမိုင်းလိမ်ရေး၍ တင်ပြခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ဤသည်မှာ “ရိုဝန်ညှာ/ရိုဟင်ဂျာ” ဝေါဟာရ ပေါ်ပေါက်လာပုံ သမိုင်းအစဖြစ်သည်။ ဤသမိုင်းလိမ်ကို ဂါဒီယန်သတင်းစာ၌ပင် ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသား ဖော်ဇံက ၁၉၅၁ ခု၊ စက်တင်ဘာလ (၆)ရက်၌ တုံ့ပြန်ချေပခဲ့သည်။ ထိုသမိုင်းလိမ်ကို ချဲ့ကား၍ အမ်အေတဟီးရ်ဘသာ (ဘူးသီး တောင်)က ၁၉၆၀၊ မေလထုတ် ဂါဒီယန်မဂ္ဂဇင်း၌ ထပ်မံတင်ပြခဲ့ပြန်သည်။ ထိုဆောင်းပါးကို ရခိုင် အမျိုးသားခေါင်းဆောင် ဦးဘစံက သမိုင်းလိမ်ဖြစ်ကြောင်း ဝေဖန်ပြီး ၎င်းတို့မှာ စစ်တကောင်းသားများ ဖြစ်ကြောင်း ဖော်ထုတ်ခဲ့ သည်။
ဗြိတိသျှခေတ်၌ တံခါးမရှိ ဓါးမရှိ ၀င်ရောက်အခြေစိုက်ကြသော စစ်တကောင်းသား ဘင်္ဂါလီတို့၏ဒဏ်ကို မောင်တောနှင့် ဘူးသီးတောင်မြို့နယ်များမှ ရခိုင်များ အကြီးအကျယ်ခံခဲ့ရသည်။ စစ်အတွင်း ၁၉၄၂ ခု၌ လူမျိုး အဓိကရုဏ်းဖြစ်၍ ဒေသခံရခိုင်များ သေသူသေ၊ ပြေးသူပြေးဖြစ်ခဲ့ပြီး ထိုနယ်ကို စစ်တကောင်းသား ဘင်္ဂါလီမူဆလင်များ ရာနှုန်းပြည့် အုပ်စိုးမိသွားသည်။ လွတ်လပ်ရေးခေတ်ဦး၌ မိမိကျေးရွာသို့ ပြန်လာ ကြသော ရခိုင်တို့အား မူဂျာဟတ်သူပုန်များ မောင်းထုတ်ခဲ့သောကြောင့် ပြေးကြရပြန်သည်။ ရခိုင်ကျေးရွာ (၆၁)ရွာ ပြိုပျက်ခဲ့သည်။ ၁၉၄၂ ခုကာလ ရခိုင်ဒုက္ခသည်များနှင့် မူဂျာဟတ် သူပုန်ထသည့်ကာလ (၁၉၄၈-၅၈) ရခိုင်ဒုက္ခသည်များမှာ လူမသိသော ရွာပုန်းရွာရှောင် (IDP)အဖြစ် မောင်တော၊ ဘူးသီးတောင်၊ မြောက်ဦး၊ မင်းပြား၊ မြေပုံ၊ ပေါက်တော၊ စစ်တွေမြို့များ၌ ခိုလှုံခဲ့ကြသော ဒုက္ခသည်များမှာ သိန်းချီရှိနေ သည်။ ထို IDP များအရေးကို လူ့အခွင့်အရေးရှုထောင့်မှကြည့်လျှင် ၎င်းတို့သည် လူ့အခွင့်အရေး ဆုံးရှုံးနေသော တိုင်းရင်းသား ဒုက္ခသည် အစစ်အမှန်များ ဖြစ်သည်ဟု ဆိုရပါမည်။ ထိုရခိုင်ဒေသခံတို့အား ဗြိတိသျှခေတ်၌ စစ်တကောင်းနယ်မှ တံခါးမရှိ ဓါးမရှိ ၀င်လာကြသော ဘင်္ဂါလီနယ်ချဲ့သမားတို့က အကြမ်းဖက်မောင်းထုတ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ယခု ဒေသခံရခိုင်များနှင့် အခြားတိုင်းရင်းသား မြို၊ သက်၊ ခမီး၊ ဒိုင်းနက် လူမျိုးစုအားလုံးအရေအတွက်မှာ မောင်တောမြို့နယ်၌ (၁၀%)ပင် မရှိချေ။ ဘူးသီးတောင်မြို့နယ်၌ (၁၅%)ခန့်သာ ကျန်တော့သည်။ ဤအခြေအနေမှာ ရခိုင်ဒေသခံတို့အတွက် ရင်လေးစရာဖြစ်သည်။ ဤသမိုင်းဖြစ်ရပ်မှန်များကို ပြင်ပသတင်းမီဒီယာများ လေ့လာတင်ပြသင့်သည်။ လူမသိသူမသိသော အမေ့ခံ ရခိုင်ရွာပုန်းရွာရှောင် IDP များ၏ ခံစားချက်များကို မေးမြန်းစုံစမ်း၍ ကမ္ဘာ့မီဒီယာပရိသတ်အား အသိပေးသင့်သည်။ ထိုမီဒီယာပရိသတ်၏ ကရုဏာသက်မှု၊ ကိုယ်ချင်းစာမှုကို ရခိုင်ရွာပုန်း ရွာရှောင်များ ခံစားထိုက်သည်။ ယခု ပြောင်းပြန်ဖြစ်နေသည်။ ပြည်ပ မီဒီယာသတင်းထုတ်လွှင့်ချက်များ၌ “ရိုဟင်ဂျာ” အမည်ခံသူတို့သာ အဖိနှိပ်ခံ ဒုက္ခသည်များအဖြစ် ကွင်းကွင်းကွက်ကွက် ပေါ်လွင်အောင် မီးမောင်းထိုးပြ နေကြသည်။ ဒေသခံ တိုင်းရင်းသား ရခိုင်ဗုဒ္ဓဘာသာများ “ရိုဟင်ဂျာ”အမည်ခံသူတို့ထံ နှစ်ပေါင်း (၆၀)ခန့် ခြိမ်းခြောက်၊ အနိုင်ကျင့်၊ မောင်းထုတ်ခံခဲ့ရပုံများကိုမူ တလုံးတပါဒမျှ မထုတ်လွှင့်ခဲ့ကြဖူးချေ။ ဤရခိုင် ရွာပုန်း ရွာရှောင် ဒုက္ခသည်များကိစ္စ မှန်/မမှန်ကို ဒေသခံသတင်းထောက်များထံမှတစ်ဆင့် စုံစမ်းသိရှိ နိုင်ပါသည်။ ၎င်းဒုက္ခသည်တို့ မြို့ပေါ်ရပ်ကွက်များသို့ ထွက်ပြေးလာရခြင်း အကြောင်းရင်းကို စုံစမ်းကြည့်ပါ က စစ်တကောင်းသား ဘင်္ဂါလီမူဆလင်များကြောင့်ဖြစ်ကြောင်း၊ ထိုစစ်တကောင်းသားတို့မှာ အဖိနှိပ်ခံများ မဟုတ်ဘဲ လူ့အခွင့်အရေး အရေခြုံထားသော တိုင်းရင်းသား အယောင်ဆောင် နယ်သစ်ချဲ့ထွင်သူများသာ ဖြစ်ကြောင်း၊ ရွာပုန်းရွာရှောင်များမှ ထိုစစ်တကောင်းသားများ၏ ခြိမ်းခြောက်နှိပ်စက်မောင်းထုတ်ခံရသော ဒုက္ခသည်များဖြစ်ကြောင်းတို့ကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်း သိလာလိမ့်မည်ဟု ယုံကြည်ပါသည်။
“ရိုဟင်ဂျာ”အမည်ခံသူတို့အား “နယ်သစ်ချဲ့ထွင်သူများ”ဟု သုံးနှုန်းခဲ့ခြင်းမှာ စာရေးဆရာကြီး မောင်ထင် နောက်သို့လိုက်၍ သုံးနှုန်းခြင်းသားဖြစ်ပါသည်။ ဆရာကြီးမှာ လွတ်လပ်ရေးရစ၌ ရခိုင်တိုင်းမင်းကြီးအဖြစ် အမှုထမ်းခဲ့ဖူး၍ ရခိုင်ဒေသအခြေအနေကို ကောင်းစွာသိသူဖြစ်သည်။ ဆရာကြီးက “ရခိုင်ပြည်နယ် အစီရင်ခံစာ”၌ “စစ်ပြီးခေတ် စစ်တကောင်းနယ်သားတို့၏ ၀ါဒသည် နတ်မြစ်တစ်ဖက်ကမ်းရှိ မယူတောင် တန်းဒေသနှင့် ကုလားပန်ဇင်းမြစ်ဝှမ်းဒေသတို့ကို နယ်မြေသစ်အဖြစ်ဖြင့် အခြေစိုက်ရန်ဟူသော ၀ါဒ ဖြစ်သည်”ဟု ရေးသားခဲ့သည်။(မြ၀တီ ၁၉၆၀၊ဇူလိုင်) မှန်ပါသည်။ သူတို့ နယ်ချဲ့ကြခြင်းသာဖြစ်သည်။ ကျွန်တော်တို့ဒေသခံ ရခိုင်ဗုဒ္ဓဘာသာများ ကိုယ့်ရပ်ကိုယ့်ရွာများမှ အသက်လု ထွက်ပြေးလာကြရသည်။ ယခု မောင်တောနှင့် ဘူးသီးတောင်မြို့နယ်များကို သူတို့လူဦးရေ အသာစီးဖြင့် လွှမ်းမိုးထားနှင့်ပြီး ဖြစ် သည်။ ထိုလူဦးရေ လွှမ်းမိုးမှုကို လက်နက်သဘွယ်အသုံးပြု၍ မြန်မာအစိုးရ အဆက်ဆက်ထံ “မူဆလင် ပြည်နယ်”ထူထောင်ပေးရန် ၎င်းတို့ တောင်းဆိုခဲ့ကြသည်။ မူဂျာဟစ် သူပုန်ထခဲ့ကြသည်။ RIF, RSO အစရှိသော မြေအောက်အဖွဲ့အစည်းများ ထူထောင်၍ မြန်မာအစိုးရကို အမြဲတမ်း အနှောင့်အယှက် ပေးခဲ့ကြသည်။ ၎င်းတို့၏ ခြိမ်းခြောက်ခံရမှုကြောင့် ဒေသခံတို့မျာ ကျီးလန့်စာစား ဖြစ်နေရသည်။ ၁၉၈၈ ခု၊ မေလ(၁၃)ရက်နေ့၌ မောင်တောမြို့ပေါ်ရှိ ရခိုင်ဗုဒ္ဓဘာသာတို့အား အကြမ်းဖက် သုတ်သင်ပစ်ရန် “ရိုဟင်ဂျာ”အမည်ခံသူ မူဆလင်တို့ အားထုတ်ခဲ့ကြသေးသည်။ လုံထိန်းတပ်က ကာကွယ်ကယ်တင်ခဲ့၍သာ အသက်ဘေးမှ သီသီလေး လွတ်မြောက်ခဲ့ကြသည်။ ဤဖြစ်ရပ်ကို ကြည့်လျှင် “ရိုဟင်ဂျာ”တို့၏ အန္တရာယ် မည်မျှကြီးကြောင်း မှန်းဆနိုင်သည်။
“ရိုဟင်ဂျာ”အမည်ခံသူတို့၏ အန္တရာယ်မှာ ဒေသခံ (ရခိုင်၊ မြို၊ သက်၊ ခမီး၊ ဒိုင်းနက်) တို့နှင့်သာ ဆိုင်သည် ဟု မမြင်ဘဲ ပြည်ထောင်စု မြန်မာနိုင်ငံ တိုင်းရင်းသားအားလုံးနှင့်ဆိုင်သော “ဘုံပြဿနာ”ဖြစ်သည်ဟု မြင်ဖို့လိုပါသည်။ သို့မဟုတ်ပါက ထိုဒေသမှာ “ရိုဟင်ဂျာ”အမည်ခံ တိုင်းရင်းသားအယောင်ဆောင် ဘင်္ဂါလီ မူဆင်တို့၏ လူဦးရေ ဆူနာမီလှိုင်းတံပိုးများအောက်၌ စုံးစုံးမြှုပ်သွားမည်မှာ သေချာသည်။ ထိုအန္တရာယ်ကြီး ကို ညီအစ်ကို တိုင်းရင်းသားအပေါင်း လက်တွဲဟန့်တားနိုင်ပါမှ ၎င်းတို့၏ နယ်သစ်ချဲ့ထွင်မှုကို ကာကွယ်နိုင် မည်ဖြစ်ကြောင်း တင်ပြရပါသည်။
( http://www.arakanfolks.com/2012/05/blog-post_26.html )
ကိုရင် မောင် has written 17 post in this blog.
View all posts by koyinmaung →	Blog
ကိုရင်မောင် says: ၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလထုတ်ဝေသော ပစ္ဆိမရပ်ဝန်း မဂ္ဂဇင်း အမှတ်(၁)
Gipsy says: ကိုရင်မောင်ပြောတာလဲ ဟုတ်တာပါပဲ …
သူတို့က မိန်းမ ၄ ယောက်ယူသဗျား….
ထွက်လာမဲ့ လူဦးရေ ကို စဉ်းစားသာ ကြည့်လိုက်ပေတော့….
အမယ်လေးလေး .. ခက်ပဲ ခက်လှချည်ရဲ့…ရိုဟင်ဂျာတွေရယ်…..။
ဆူး says: လူနည်းတုန်းက မသိသာပေမဲ့ လူဦးရေ တိုးပွားနှုန်း ကတော့ လူများလာတာနဲ့ အမျှ တကယ်ကို ကြောက်စရာကြီး ဖြစ်နေပြီ။
သမိုင်း တလျှောက် အိရော အိရော နဲ့ မျက်စိပိတ် နားပိတ်ပြီး နေခဲ့တဲ့ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးတွေ နဲ့ လာဘ်ပေး လာဘ်ယူမှုတွေ ဒီတခါ အခွင့်အခါ ကြုံတုန်း ပြတ်ပြတ်သားသား လုပ်သင့်တယ်။
ဘင်္ဂလား က တောင် လက်မခံတာ သူတို့ကို လက်ခံစရာတော့ လုံးဝ မရှိဘူး ထင်တယ်။
ရိုဟင်ဂျာတွေ ကို သနားစရာ လူတွေ အဖြစ် မီးမောင်းထိုးပေးမဲ့သူတွေ ပြီးတော့ ထောက်ပံ့ပေးမဲ့သူတွေ လက်နက်တပ်ဆင်ပေးမဲ့ သူတွေ ရှိနေပါတယ်။
ရိုဟင်ဂျာ မူဆလင်တွေ ကို အင်အားကြီး ချမ်းသားတဲ့ မူဆလင်နိုင်ငံတွေက ဘာလို့ လက်မခံသလဲ အဖြေကတော့ ရှင်းပါတယ်။
ဒီလူတွေ မူဆလင် နိုင်ငံတခုက လက်ခံလိုက်လျှင် ဒီတိုင်းပြည်မှာ ရှိတဲ့ မူဆလင် အရေအတွက် ယာယီ အားဖြင့် လျော့သွားနိုင်ပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံမှာ ရှိတဲ့ ၈၆% ရှိတဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေ အနေနဲ့ ၁သန်းလောက် လျော့သွားခဲ့သော်.. ရာနှုန်းတက်လာပါလိမ့်မယ်။ ဗျူဟာမြောက် လူဦးရေတိုးပွားခြင်းသည် သာသနာပြုခြင်း မည်၏ဟု လက်ခံထားသော သူတို့ အဖို့ အင်မတန်မှ နစ်နာဆုံးရှုံးစေတဲ့ အခွင့်အရေးတခု ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါကြောင့် ချမ်းသာတဲ့ မူဆလင် နိုင်ငံများက မျက်စိမှိတ်ပြီး လက်မခံခြင်းသည် သိမ်မွေ့စွာ ချုပ်ကိုင်ထားတဲ့ ဗျူဟာ တခုပါ။ မြန်မာနိုင်ငံ ကိုသာ ဖိအားပေးဖို့ ၀ိုင်းဝန်း တိုက်တွန်းခြင်းဖြင့် ရိုဟင်ဂျာတွေကို အတည်အတံ့ လက်ခံ ထားပေးခဲ့သော် မူဆလင်ပြည်နယ်တောင်းမယ် ပြီးတော့ ပြည်နယ် အုပ်ချုပ်ခွင့်တောင်းမယ် နောက်ထပ် လာမယ်.. နိုင်ငံတည်ထောင်မယ်။ ဘင်္ဂလားနဲ့ မြန်မာ နယ်စပ်မှာ နိုင်ငံ အသေးလေး တခု ဖြစ်လာပြီး မြန်မာဆိုတာ ပျောက်သွားအောင် ၀ါးမြို ဖို့ အထိ ဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။
ဒီအချိန်မှာ ခေါင်းမာသင့်ရင် ခေါင်းမာရပါလိမ့်မယ်။
မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဒီလူတွေ နေထိုင်နေကြတာ နှစ်ပေါင်းတော့ မနည်းပါဘူး။ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ နိုင်ငံသားဖြစ်ခွင့် အနေနဲ့ မှာတော့ လုံးဝ မဖြစ်သင့်ပါဘူး။ နိုင်ငံသား တယောက် အနေနဲ့ မရွှေ့ပြောင်းနိုင်တဲ့ မြေတွေ အိမ်တွေ ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရှိပါတယ်။ နိုင်ငံသား ပေးလိုက်ရင်… မြန်မာ ဘိုးဘွားပိုင်တွေ အကုန် ရိုဟင်ဂျာတွေ ပိုင်ဆိုင်ပြီး မြို့ထဲ နေတဲ့ မြန်မာတွေ မြို့ပြင်ထွက်ပြီး တဲစုတ်နဲ့ နေရတဲ့ အဖြစ်တွေ ရောက်လာလိမ့်မယ်။ တချို့ နေရာတွေမှာတောင် လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးရဲ့ ချုပ်ကိုင်မှု အားနည်းလို့ အိုးအိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုတွေ များစွာ နဲ့ ဘိုးဘွားပိုင်မြေကို ထိုးအပ်ပြီး မြို့ပြင်ထွက်နေရတဲ့ မြန်မာတွေ များစွာ ရှိနေဆဲပါပဲ။ နာမည်ကြီး ဆောက်လုပ်ရေး လုပ်ငန်းပိုင်ရှင်တွေရဲ့ မှတ်ပုံတင်တွေ ဇစ်မြစ်တွေ စစ်ဆေးသင့်ပြီ ထင်တယ်။
အူးလေး says: တကယ်စစ်လိုက်ရင် ရှင်းရှင်းလင်းလင်း သိရမှာ
လူသားချင်းစာနာပေမဲ့ ဒီဟာတွေကိုတော့ ပြတ်သားစွာ အေ၇းယူရပါမယ်
အခုလို အခင်းတွေဖြစ်ပွါးမှုကို အခွင့်ကောင်းမယူတတ်ရင်
နောင်ဘယ်တော့မှ အဆင်ပြေတော့မယ် မထင်တော့ပါ။
kyaw swar says: ဒီအရေးက အဓိကတာဝန်ရှိတာ လဝက လူကြီးတွေပါ သူတို့က ပိုက်စံယူပြီးမှတ်ပုံတင်လုပ်ပေးတော့ဒီကုလားတွေစောက်ကျေားတင်နေတာေါ့
တကယ်ဆို မကောင်းတာ လဝက လူကြီးတွေပါ
ahnyartamar says: ဒါဆိုရင်တော့ အမျိုးသားရေးတာဝန်တရပ်အနေနဲ့ တိုင်းရင်းသားအယောင်ဆောင် ဘင်္ဂါလီ မူဆင်တို့ရဲ့ အန္တရာယ်ကို တိုင်းရင်းသားညီအစ်ကိုအပေါင်းနဲ့အတူ လက်တွဲဟန့်တားရမှာပါ။
surmi says: ကိုရင်မောင်ကြီးတို့ များမရေးတော့ လည်း ဘာမှမရေးဘူး
ရေးလိုက်တော့ လည်း တကယ့် ရှယ်ဘဲဗျို့ 
ကောင်းတယ်ဗျာ ဒါမှကျွန်တော်တို့ လဲသိရမှာ……..။
ကိုရင်မောင် says: ကိုဆာမိရယ် ကျနော်ဒီလောက်ကောင်းတဲ့
ဘဲဥ says: *ပြည်သူတွေ အကုန်လုံးကလည်း တိုင်းရင်းသားအဖြစ် လက်မခံဘူး။
* စစ်တပ်ကလည်း တိုင်းရင်းသား အဖြစ် လက်မခံဘူး။
* ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကလည်း တိုင်းရင်းသား အဖြစ် လက်မခံဘူး။
*၈၈ မျိူးဆက် ခေါင်းဆောင်တွေကလည်း တိုင်းရင်းသားအဖြစ် လက်မခံဘူး။
*သမိုင်းဆရာတွေကလည်း တိုင်းရင်းသားအဖြစ် လက်မခံဘူး။
ကဲ .. ရိုဟင်ဂျာ .. တိုင်းရင်းသား ဟုတ်၊ မဟုတ် .. ဘာများ အငြင်းပွားနေရဦးမှာလဲ။
ဘယ်နိုင်ငံကမှ လက်မခံချင်တဲ့ကောင်တွေ ဒီမြေပေါ်မှာလာပြီးတော့ ဟောင်ဖွာဟောင်ဖွာလုပ်နေတာ
ဘယ်သူလွန်တာလဲဆိုတာ စဉ်းစားကြပေါ့ဗျာ။ အကြံပေးချင်တာကတော့ အဲ့ဒီ လှေစီးဒုက္ခသည်ဆိုပြီး အော်နေတဲ့ကောင်တွေ ဒင်းတို့စီးလာခဲ့တဲ့လှေနဲ့ ပင်လည်ထဲသာ ပြန်မျှောပစ်လိုက်တော့ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 45
အူးလေး says: အဲ့သလို အစကတည်းက လုပ်ရမှာ
မလုပ်ဖြစ်ခဲ့လို့ အခုလို ဝမ်းနည်းဖွယ်ရာတွေ ကြားရတာ
လာရာလမ်းသို့ အားလုံးကြွမြန်းတော်မူကြပါ ။
kyeemite says: ရှာဖွေတင်ပြပေးတဲ့ ကိုရင်မောင်ကို
ကိုရင်မောင် says: ဒီဆောင်းပါးရေးတဲ့ ဆောင်းပါးရှင်( ဒေသခံတဦး ) ဟာ ယခုရခိုင်အရေးမဖြစ်ခင်ထဲက
ဖြစ်နိုင်ယင်အခြားဆိုက်တွေမှာပါ ရှိသင့်တယ်လို့ထင်ပါတယ် ဒါမှမြန်မာပြည်သူတွေ
သိကြမှာပါ တကယ်လို့ အခြားဆိုက်တွေမှာတင်ခဲ့ယင်….
၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလထုတ်ဝေသော ပစ္ဆိမရပ်ဝန်း မဂ္ဂဇင်း အမှတ်(၁)
မူရင်း မဂ္ဂဇင်းအမည်နဲ့ ကျနော်ကူးခဲ့တဲ့ဆိုက်တော့ထည့်ပေးစေချင်ပါတယ်
မိုးတိမ် says: ကျေးဇူးပါ ကိုရင်မောင်
ကျုပ်တို့ကို အစွန်းရောက်လို့ပဲပြောချင်ပြောတော့ ရခိုင်ပြည်ကြီး ကုလားလက်ထဲမရောက်ရင်တော်ဘီ။
ဘာဝါဒမှမရှိဘူး အစွန်းရောက်ကဘယ်သူတွေလဲ ကြည့်တတ်ရင်မြင်မှာပါ။
လစ်ဘရယ်အော်နေ တစ်နိုင်ငံလုံး လူမျိုး၊ဘာသာ၊သာသနာပျောက်မှ ဘယ်ဟာမျှတလဲတွေးကြတာပေါ့။
အဲအချိန်ကျမှ လစ်ဘရယ်တွေရယ် အလ္လာကို ဖင်ထောင် ကန်တော့လိုက်ပါတော့နော။
သားဦး၊မြေးဦး says: ကိုရင်မောင်ရေ ကျနော်လဲ သေသေချာချာကို ဖတ်သွားပါတယ်ဗျ။
ခုလိုမျိုးဝေမျှတော့ တိုက်ဆိုင် စစ်ဆေးရတော့တာပေါ့ဗျာ။ရိုဟင်ဂျာ—-
ဆိုတာ တိုင်းရင်းသားထဲမှာ မရှိပေမယ့်. နိုင်ငံကိုခေါင်းဆောင်သူဖြစ်တဲ့
ဦးနု ကိုယ်တိုင်ခေါ်ယူသွင်းခဲ့လို့ ————-
သမိုင်းနေ့ စွဲများထဲက မှတ်သားစရာနောက်တစ်ခုက ၁၉၅၃ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ(၇-၈-၉)ရက်များတွင် စစ်တွေမြို့ ၊ဝင်္ဂဘာကွင်းကြီး အတွင်းရှိ မဏ္ဍပ်ကြီးအ
တွင်း၌ ဝတ်လုံ ဦးရွှေဘော်က သဘာပတိ၊ဦးလှထွန်းဖြူက အခမ်းအနားမှူး၊ဦးစောထွေးအောင် ကအတွင်းရေးမှူး အဖြစ် တင်မြှောက်၍ ရခိုင်ပြည်လုံးဆိုင်ရာညီ
(၆)ရခိုင်ပြည် မူဂျာဟိန်းတို့ အား နှိမ်နှင်းသော အစိုးရနှင့် တပ်မတော်အားချီးကျူးရေး
ရခိုင်ပြည်နယ် ဘူးသီးတောင်၊မောင်တော မြို့ နယ်များရှိ တိုင်းရင်းသား ရခိုင်-မွတ်စလင်မ်များ ဘာသာဝင်များနှင့် ရခိုင် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များအားနှိပ်စက်ညှင်းပန်း
သော မူဂျာဟိန်း သောင်းကျန်းသူများကို တိုက်ခိုက်နှိမ်နှင်းပေးသော တပ်မတော်နှင့်
အစိုးရအား ဤညီလာခံ ကြီးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းအဆိုကို
မြိုင် က တင်သွင်းခဲ့ပြီး မောင်တော
မြို့ နယ်ကိုယ်စားလှယ်ဦးစံအောင်ကျော်နှင့် ရသေ့တောင်
ကိုယ်စားလှယ် ဦးသာကျော်တို့ ကထောက်ခံလျှက် တက်ရောက်လာသူ
အားလုံး သဘောတူလျှက် ဆုံးဖြတ်အတည်ပြုကြကြောင်း။
%%(ရခိုင် ပြည်လုံးဆိုင်ရာ ညီလာခံ စာမျက်နှာ -၁၂)%%
ကြောင်ကြီး says: ရိုဟင်ဂျာ အရေးကိုပြောလိုက်ရင် ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှက ခိုးဝင်လာတဲ့ဘင်္ဂါလီတွေအကြောင်းသာ များတယ်၊ မြန်မာပိုင်မြေ စစ်တကောင်း၊ ရှင်မဖြူကျွန်းတို့ကို စစ်နိုင်အင်္ဂလိပ်တွေအလိုအရ ဘင်္ဂလာဒေ့ရ်ှဘက် (အဲဒီတုန်းက အိန္ဒိယပြည်ပေါ့လေ) ပေးလိုက်ရတာကြတော့ ဖော်ထုတ်ရေးသားဂျဒါ မတွေ့ဘူး။ ဘာပြုလို့လဲ… အစိုးရအနေနဲ့ အကျယ်အကျယ် ဖြစ်မှာဆိုးလို့ မပြောတာ ထားပါတော့.. အင်တာနက်မှာ ငပွဂျီး ငဖွဂျီး ငတဂျီးများ ဘဇာကြောင့် ငြိမ်နေရသလဲ စဉ်းစားလို့ရဗူး…။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 8415
kai says: ပထမအင်္ဂလိပ်မြန်မာစစ်က.. ပေးလိုက်ရတဲ့..မြေတွေထဲမှာ.. လူတွေနေတာသေချာပါတယ်..။
အခု.. ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံဖြစ်နေတဲ့.. မြေ..ဒေသထဲကလူတွေပေါ့..
စစ်ရှုံးလို့.. ကိုယ့်မြေကို.. ဖဲ့ပေးလိုက်ရတယ်ဆိုကတည်းက.. မူရင်းမြေ..ဒေသလည်း.. ရှိပြီပေါ့..
တချို့မြေတွေက.. လွတ်လပ်ရေးနဲ့အတူ.. အင်္ဂလိပ်က.. မြန်မာပြည်ဖက်ပြန်ထည့်ပေးပါတယ်.
အဲဒီ..မြေ…ဒေသ..မှာ..နေ..သူ.. တို့.. ဟာ..ဘယ်သူတွေလည်း ?
The First Anglo-Burmese War (Burmese: ပထမ အင်ျဂလိပျ မွနျမာ စဈ; [pətʰəma̰ ɪ́ɴɡəleiʔ mjəmà sɪʔ];5March 1824 – 24 February 1826) was the first of three wars fought between the British and Burmese Empire in the 19th century. The war, which began primarily over the control of northeastern India, ended inadecisive British victory, giving the British total control of Assam, Manipur, Cachar and Jaintia as well as Arakan and Tenasserim. The Burmese were also forced to pay an indemnity of one million pounds sterling, and signacommercial treaty
Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 284
Mical David ko Jar Yit says: ကွယ် ၊ မသိလို့ မတတ်လို့ပေါ့အေ့ ၊ ဒါလေးများ ၊
ကိုကြောင်ကြီး သိခဲ့ရင် အနည်းအကျဉ်း ဘာညာကွိကွ လုပ်ပေးပါလား ၊
ချွန်နော် တို့က အသိဥာဏ် နည်းလို့ပါ ။
သားဦး၊မြေးဦး says: ကျနော့် ဖေ့စ်ဘွခ်စာမျက်နှာတွေမှာ ခဏခဏ ပြောဖူး ရေးဖူးတယ်။
ဟိုး ချင်းပြည် ပလက်ဝဘက်ကနေ မိုးတွင်းရေ များချိန်မှာ ၀ါးဖောင်တွေ
နဲ့ ဆင်းပြီး အင်္ဂလိပ်ကို တိုက်ထုတ်ခဲ့တဲ့ မဟာဗန္ဒုလလိုစစ်သူကြီး ပြန်သိမ်း
ခဲ့တဲ့ ရှင်မဖြူကျွန်းကို ကနေ့အမေရိကန်တွေသိမ်း ရေတပ်စခန်းချထားတာ
ဘယ်သူမှ တစ်ခွန်းမှမပြောတာ ရခိုင်တွေကိုယ်စား ရင်နာတယ်။တတိုင်းပြည်
လုံးက တစ်လက်မမှ အကျူးကျော်မခံဘူးဆိုတာ အမေရိကန်မပါဘူးဆိုတာ
myanmarcitizen says: ဒီကောင်တွေဘယ်ကရောက်လာတာလဲ။ မိုးပေါ်ကနေ ကျလာတာတော့မဖြစ်နိုင်သလို၊ တရုပ်နဲ့ ယိုးဒယား ကနေခိုးဝင်လာတာတော့မဖြစ်နိုင်တာသေချာတယ်။ ကျွန်တော်တော့ ဘင်္ဂလားပဲ ပြေးပြေးမြင်တယ်ဗျာ။ ရုပ်လဲတူတယ်ဗျာ၊ ဘာသာလဲတူ ကဲပြောစရာလိုနေသေး လို့လား မင်းတို့လူမင်းတို့တာဝန်ယူတော့ပေါ့။
Lwin Aung says: I think, We may face with war at the future.